Kuxoxwe ngezindaba zabesifazane | News24
Kuxoxwe ngezindaba zabesifazane
06:00 30/08/2018 Thami Ka Nkosi
NJENGALOKHU inyanga yabantu besifazane ingakafinyeleli esiphelweni abantu besifazane abangaphansi kwe-Ezinqoleni Masakhisane Women Society bahlanganyele ndawonye ngoMgqibelo owedlule nalapho babezitomota ngesidlo santambama baphinde baxoxisanana ngezinkinga ezibhekene nabo uqobo.
Lomcimbi obewubanjwe okukuqala nokulindeleke ukuba ugujwe minyaka yonke ububanjelwe esontweni i-Evangelical kanti ubuhanjelwe izikhulumi ezahlukene okuhlanganisa abaqhamuka kwezomthetho kanye nezinhlaka ezimele ukuthuthukiswa kwabesifazane.
Isikhulumi ebesiqhamuka emaphoyiseni ekhuluma kulomcimbi uthe iNingizimu Afrika igubazelwe ifu elimunyama lokuhlukunyezwa kwabesifazane emakhaya kanti abanye bagcina sebelahlekelwe nayizimpilo zabo ngenxa nje yokuthi bafela ngaphakathi.
Uveze ukuthi manje sekuyisikhathi sokuba abantu besifazane bayeke ukufela ngaphakathi kodwa baphume bafune usizo futhi baye emaphoyiseni uma kungukuthi bazithola bebhekene nengcindezi yokuhlukumezeka emakhaya.
“Kumele uma kungukuthi uyazibona uyahlukumezeka ungumuntu wesifazane usheshe uphume ungalokhane uhleli ngoba lokho ungagcina sewulahlekelwa nayimpilo yakho kanti ebeyikade ingagwemeka,” kuchaza uNkz Hadebe.
UMsunguli walenhlanganisela yabesifazane uNtombikayise Ntobela utshele omama ngenhloso abayibekelwe kanye nokuthi kubalulekile ukuthi bakwazi ukulekelelana ngokukhulisana ikakhulukazi emabhizinisini kanye nangokwezikamoya.
Uthe inkinga enkulu ngukuthi abantu besifazane bahlala njalo bebukeleka phansi kanti nabo bayakwenza ukuthi bagcine bebukelwa phansi ngoba ibona kuqala abanganikani ithemba Kanye nokufukulana.
“Kubalulekile futhi ukuthi singabantu besifazane sazi ukuthi likhulu iqhaza esingalidlala ekufukuleni umnotho wakulesi sifunda sethu singagcini nje kuphela ngokulindela nokukhangeza kuhulumeni osanemadodeni,” kusho yena.
Unkz Ntobela uphinde wahlaba ikhwelo elibhekise kuhulumeni ukuba aqinisekise ukuthi abantu besifazane bahlala njalo bevikelekile njengalokhu kubonakala kulokhu kuqhubekile ukudlwengulwa kwabo ikakhulukazi labo abahlala ezindaweni zasemakhaya.